IPhone 7 jees jees waxay soo jeedinayaan inay yeelan doonto badalaad carrab la '| Wararka IPhone
Sawirka cusub ee iphone 7 ayaa soo jeedinaya inuu yeelan doono shuruudo carrab la '
Dhowr saacadood ka hor waan daabacnay sawiro cusub oo iPhone 7 majaajillo in, inkasta oo ay run tahay inay xaqiijin doonaan naqshadda la soo daayay dhowr bilood ka hor, ma aysan bixin macluumaad cusub. Waxa aan aragnay waxay ahayd gadaasha afar iphone 7 mockups, mid walbana mid ka mid ah midabada iPhone 6s laga heli karo. Kadib markaan aragnay sawirka kujira boostadan meesha aan ku aragno in majaajillada iPhone 7 Plus (ama Pro) aysan lahayn shuruudo carrab la ', waxaan jeclaan laheyn inaan aragno muuqaalka bidix ee aaladda.
Sugitaanka in la arko qaybta bidix (haddii aan ka eegno dhinaca hore) ee iphone 7 XNUMX muddo dheer imaatinka. Isla warbaahinta Faransiiska (halka uu wax ku qoro OnLeaks) ayaa cusbooneysiiyay qoraalkii uu saaka qoray isagoo ku daray laba sawir oo cusub. Mid ka mid ah sawirrada aad hoos ku arki doontid waxaa si dhammaystiran u dhammaystiraya kii aan saaka daabacnay: markaan aragno bidixda bidix ee iPhone-ka, waxaan arki karnaa in badhamada kor iyo hoosba ay u jiraan iyo sidoo kale beddel carrab la ' intee in leeg ayaan jecel nahay dadka isticmaala qaarkood.
IPhone 7 mockup wuxuu noo sheegayaa in nooca 4.7-inji uu yeelan doono shuruudo carrab la '
Qeyb ahaan, sawirka muujinaya beddelka aan soo sheegnay waa mid xiiso leh maxaa yeelay kuma sugna qosolka iPhone 7 Plus ee xaday. In kasta oo ay run tahay in aan ka hadlayno moodooyinka bandhig, waxaan bilaabi karnaa inaan ka fikirno in qaabka 5.5-inji uusan laheyn badhanka oo macnahan uu u ekaan doono moodooyinka iPad-kii ugu dambeeyay.
IPhone 7 Plus jees jees ah
Faallo yar ka bixinaya sawirka labaad ee mockups-ka iPhone 7, waxa kaliya ee aniga ila muuqda xiisaha aniga ayaa ah inaad arki karto salka iPhone-ka oo u dhow kamaradda. Waxay u badan tahay in qof uu ku hayay jagadaas si uu u muujiyo Aqoonsiga Taabashada iyo inuu muujiyo inay tahay mid farsamo ah, sida iPhone 6s oo uusan jeclayn xanta sheegatay in Aqoonsiga dokumentiga waxay noqon laheyd taabasho oo la jaan qaada 3D Touch. Laakiin, mar kale, waa inaan xusuusanno inaan ka hadlayno majaajilooyinka bandhigga. Si aan uga baxno dhammaan shakiga wali waxaan sugeynaa ilaa laba bilood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 7 » Sawirka cusub ee iphone 7 ayaa soo jeedinaya inuu yeelan doono shuruudo carrab la '
Pokemon Go waxaa loo tixgeliyaa ciyaarta moobiilka ugu fiican abid
watchOS 3 waxaa ku jira muuqaal cusub oo loogu talagalay wicitaanada degdegga ah